အချိန်နှင့်တပြေးညီဆက်သွယ်ရေး: WebRTC ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ | Martech Zone
အချိန်နှင့်တပြေးညီဆက်သွယ်မှုသည်ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရောက်မှုကို အသုံးချ၍ အလားအလာများ၊ ဖောက်သည်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်ပြောင်းလဲနေသည်။
Web Real-Time Communication (WebRTC) သည်ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကောများနှင့်မူလဂူဂဲလ်မှတီထွင်ထားသော APIs များဖြစ်ပြီးအုပ်စုတူအဆင့်တူအချင်းချင်းဆက်သွယ်မှုများမှအချိန်နှင့်တပြေးညီအသံနှင့်ဗွီဒီယိုဆက်သွယ်မှုကို enable လုပ်သည်။ WebRTC သည်ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာများအားအခြားအသုံးပြုသူများ၏ဘရောင်ဇာများမှအချိန်နှင့်တပြေးညီအုပ်စုတူအဆင့်တူများနှင့်အုပ်စုလိုက်ဆက်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်အသံ၊ ဗွီဒီယို၊ စကားဝှက်၊ ဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်မျှဝေခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သည်။
Twilio - WebRTC ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ WebRTC စျေးကွက်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၆၆၉ ဘီလီယံရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင်တစ်ကမ္ဘာလုံးဒေါ်လာ ၂၁.၀၂၃ ဘီလီယံသို့ရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက WebRTC သည် web browsers များကိုပစ်မှတ်ထားသော VoIP protocol provider အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ ယနေ့တွင် WebRTC အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမရှိပဲအသံ / ဗွီဒီယိုကြည့်ရှုသည့်ဘရောင်ဇာမရှိပါ။ ဤနေရာတွင် WebRTC သည်သူတို့၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီဟုယုံကြည်သောရောင်းချသူအချို့နှင့်ဤတွင်ရှိနေသော်လည်း၎င်းသည်စျေးသည်များကသာလွန်ကောင်းမွန်သောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် WebRTC ကိုအသုံးချရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
WebRTC သည် web browser မှတဆင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီပြောဆိုမှုများကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက Google မှ Chrome သည်အပတ်စဉ်အသံ / ဗီဒီယိုပေါင်း ၁.၅ ဘီလီယံကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ဒါအကြမ်းဖျင်းပါပဲ တစ်ရက်လျှင်မိနစ် ၂၁၄ သန်း။ ဒါက Chrome ပဲ! ဤတွင် WebRTC ကိုအသုံးပြု။ တွေ့ရှိနိုင်စွမ်းများ၏အသေးစိတ်ကြည့်ရှုပါ။
အချိန်နှင့်တပြေးညီဆက်သွယ်မှုကို WebRTC နှင့်ရနိုင်သည်။
ဖန်သားပြင်မျှဝေခြင်း - အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်ချက်ချင်းပူးပေါင်းပါ။ WebRTC ၏ Android / iOS ဗွီဒီယိုချက်တင်အက်ပလီကေးရှင်းသည်သင့်လျော်သောလက်လှမ်းမီသောအခြားစက်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူနှင့်မျက်နှာပြင်ကိုအဝေးမှမျှဝေနိုင်သည်။ WebRTC အချက်ပြခြင်းဖြင့်ခေတ်မှီသောဝေးလံခေါင်ဖျားသည့်ပူးပေါင်းမှုကိုထိပ်တန်းဆက်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းပေးသူနှစ် ဦး ကတည်ထောင်သည် Skype ကို& ကြေးမုံ။ မျက်နှာပြင်မျှဝေခြင်းသည်စီးပွားရေးပူးပေါင်းမှုတစ်ခုလုံးကိုနောက်အဆင့်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးအစည်းအဝေးကိုအခြေခံသည့်ကွန်ဖရင့်သည်အခြေခံကျသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးမှုများမှတင်ပြချက်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များအထိအစည်းအဝေးများ၊ မျက်နှာပြင်မျှဝေခြင်းသည်အဓိကကျသည်။
အသုံးပြုသူပေါင်းများစွာ Video Conference - မြင့်မားသော multi-user ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်သည်အသုံးပြုသူများစွာကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းကိုများစွာလိုအပ်သည်။ WebRTC အချက်ပြ server သည်အချိန်နှင့်တပြေးညီပါတီစုံဗီဒီယိုနှင့်အသံခေါ်ဆိုမှုများကိုကမ္ဘာအနှံ့သို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပါတီစုံဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတွင်ပါဝင်သူများအားလုံးကိုချိတ်ဆက်ရန် WebRTC ဗီဒီယိုနှင့်အသံခေါ်ဆိုမှုသည်အနည်းဆုံးမီဒီယာစီးဆင်းမှုကိုလိုအပ်သည်။ WebRTC ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအက်ပလီကေးရှင်းသည် MCUs (Multipoint control unit) နှင့် SFU (Selective forwarding units) မှတဆင့်ပါတီစုံဆက်သွယ်မှုကိုတိုးချဲ့သည်။
လွယ်ကူမှာပူးပေါင်း - အကောင့်တစ်ခုအတွက်သင်ဆိုင်းအင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာပလက်ဖောင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးအခြားအသုံးပြုသူနှင့်စကားပြောဆိုရန်အတွက်ပလက်ဖောင်းများစွာကိုတပ်ဆင်ပါ။ WebRTC အသံနှင့်ဗွီဒီယိုစကားဝိုင်းဆာဗာတွင်ရိုးရာလုပ်ငန်းစဉ်များမရှိတော့ပါ။ WebRTC text chat သည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စွာခံစားရန်ပိုမိုလွယ်ကူလွယ်ကူစေသည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီပူးပေါင်းခြင်းကို WebRTC မှပံ့ပိုးပေးသော browser များဖြင့်တည်ထောင်ထားသောပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ရိုးရှင်းစေသည်။
file ကိုမျှဝေခြင်း - ကြီးမားသောဒေတာများကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းသည်အမြဲတမ်းကြမ်းတမ်းခက်ထန်သည့်လုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အသုံးပြုသူများကိုအီးမေးလ် (သို့) drive ကဲ့သို့သောအခြားအသုံးချပရိုဂရမ်များသို့ပြောင်းရန် ဦး တည်သည်။ အချက်အလက်လွှဲပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းသည်အလွန်မလွယ်ကူပါ၊ အချိန်၊ အားစိုက်ထုတ်မှုနှင့်ဒေတာများစွာလိုအပ်သည်။ WebRTC အချက်ပြ server ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းတွင်ထည့်သွင်းထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်မှတိုက်ရိုက်ပေးပို့ရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျဉ်းမြောင်းစေသည် ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု API။ ထို့အပြင် WebRTC သည် bandwidth မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူဖိုင်များကိုအလွန်နိမ့်ကျသော latency ဖြင့်ပို့လွှတ်နိုင်သည်။ ထိုအရာ၏ထိပ်တွင် WebRTC သည်အချက်အလက်များကိုလုံခြုံသောခေါင်မိုးတစ်ခုအောက်တွင်ပို့သည်။
Multi-secure Video & Voice Communication - WebRTC အချက်ပြခြင်း WebSockets များမှ Android, iOS & web အက်ပ်များမှထုတ်လွှင့်ထားသော WebRTC ၏အုပ်စုလိုက်စကားဝှက်တစ်ခုလုံးကိုစာဝှက်ပေးသောအားကောင်းသည့် RTP protocol (SRTP) ပါ ၀ င်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ခေါ်ဆိုမှုအားမလိုလားအပ်သော ၀ င်ရောက်မှုနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် Wifi မှဆက်သွယ်မှုအတွက်စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုသည်။
Live Communication အတွက်အချိန်နှင့်တပြေးညီဝန်ဆောင်မှုများ - ကဏ္Rများအားလုံးတွင်တိုက်ရိုက်စကားပြောဆိုမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်မည်သည့် application နှင့်မဆို WebRTC တွင်ပေါင်းစပ်ရန်အလားအလာရှိသည်။ လက်လီ၊ အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ဖောက်သည်များထံမှမည်သည့်လုပ်ငန်းကိုမဆိုတိုက်ရိုက်စကားလက်ဆုံပြောဆိုရန်တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းကို WebKTC အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ဗီဒီယိုချက်တင်စကားပြောခန်းမှဖန်တီးသည်၊ ၎င်းသည်အချိန်နှင့်တပြေးညီဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
အနိမ့် latency ကွန်ယက် - WebRTC ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူ Video Call API သည်ဒေတာများကိုသက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်အက်ပလီကေးရှင်းသို့ဆာဗာစီးရီးထဲမ ၀ င်ဘဲတိုက်ရိုက်မျှဝေနိုင်သည်။ Browser အချင်းချင်းဆက်သွယ်မှုသည်အချက်အလက်စီးဆင်းမှုကိုချောမွေ့စေပြီး latency low network တွင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုအကျိုးရှိစေသည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ bandwidth မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ WebRTC သည် chat application သည်မက်ဆေ့ခ်ျများ၊
Node.js သုံးပြီး WebRTC ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု
MirrorFly အသုံးပြု၍ WebRTC ကိုပေါင်းစပ်ပါ
ဒီနေ့စလုပ်ချင်ပါသလား? MirrorFly ၏ Real-Time ကိုစစ်ဆေးပါ ချက်တင် API။ သူတို့ရဲ့ Chat API နဲ့အတူသင်ဟာစွမ်းဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့စွယ်စုံသုံးမက်ဆေ့ဂ်ျအက်ပလီကေးရှင်းတွေကိုတည်ဆောက်နိုင်တယ်။ ၎င်းတို့သည် web application များအတွက် real-time API နှင့် Android နှင့် iOS mobile applications များအတွက် SDK ကိုပေးသည်။
Tags: + googleအချိန်မှန်rtcဖန်သားပြင်SDKဗီဒီယိုဆက်သွယ်။ လုပ်သောအစည်းအဝေးကဗျာ
Sienna သည်သက်သောင့်သက်သာရှိသောစာဖတ်သူ၊ အသည်းအသန်စာရေးသူ၊ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်း၊ ငါနည်းပညာနှင့်သင်၏နေ့စဉ်ဘဝနှင့်ကိုက်ညီဘယ်လိုအကြောင်းရေးသားခြင်းကိုချစ်၏။